? Hevitra Wordpress maimaim-poana 9 tsara indrindra [TOP 2021] | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | lohahevitra, Wordpress
WordPress dia nitombo tamin'ny fomba ahafahantsika miditra amin'ny lohahevitra maimaimpoana avo lenta izay mamonjy antsika asa be dia be amin'ireo singa samihafa mandrafitra tranokala. Izany no antony hizaranay aminao lohahevitra maimaim-poana rehetra.
Afaka manomboka amin'ny OceanWp, Astra na GeneratePress mihitsy izay lohahevitra fampidinana haingana indrindra. Ity zava-misy ity dia tsy maintsy raisina, satria misy lohahevitra "mavesatra" izay miaraka amina endri-javatra marobe, fa rehefa mampakatra ny tranonkala dia afaka mahatratra 2 na 3 segondra isika; zavatra mahafaty amin'ny SEO an'ny tranokalanay. Ataovy.
2 Astra Theme
5 Salama Theme
Izahay dia teo aloha iray amin'ireo lohahevitra maivana indrindra izay ananantsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny tahiry WordPress maimaimpoana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, miresaka lohahevitra iray hiakanjo ny tranokalanay izahay izay manana ny antony maivana ary ampy ny fampiasana ankehitriny. Mazava ho azy, ny lohahevitra iray koa dia «mitafy» ny tranokalantsika ary amin'ity tranga ity dia tsy maintsy jerentsika fa mamaly sy vonona amin'ny «finday» izy io.
GeneratePress afaka mirehareha amin'ny ady an-doha mifanohitra amin'ny raharaha hafa momba ny zavatra ilaina toa an'i Astra na OceanWp mihitsy. Anisan'ireo mampiavaka azy tsara indrindra, ankoatr'ireo roa voalaza ireo, dia hitantsika ny filaminany sy ny fitoniany, nohamarinina ho an'ny motera fikarohana ary vonona ny hidirana; Ity singa farany ity dia manan-danja kokoa mba hahafahan'ny mpampiasa rehetra miditra amin'ny tranonkalantsika.
Manolotra maodely premium misy fiasa bebe kokoa, fa raha manandrana, ary na dia maimaim-poana aza, dia mety ho antsika ny mitafy ny tranonkalantsika ary mamela azy ho tsara. Iray amin'ireo zava-dehibe ilaina amin'ny WordPress.
GeneratePress - marary mitsika
Raha misy lohahevitra izay Ankoatra ny maivana amin'ny lanja dia feno endri-javatra izy io, Astra Theme ity. Ankoatra ny zava-misy fa raha mitady lohahevitra mety amin'ny magazay an-tserasera isika, toa ny Woocommerce, Astra dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'izany. Izy io dia manana singa hita maso sy widget ilaina amin'ny ecommerce, noho izany dia tokony ho iray amin'ireo izay ilaintsika foana ny manome lanja ho an'ny asa vaovao ho an'ny mpanjifa na ho an'ny tranonkalantsika manokana.
Toy ny amin'ny fotoana ananan'ny mpanao trano toa an'i Elementor na Divi dia mahazo tanjaka amin'ny famolavolana wb, Astra izy io aza dia manana ny asan'ny fanafenana ny lohatenin'ny pejy sy ny sisiny. Ianareo izay niatrika lohahevitra hafa dia azo antoka fa hahafantatra ny fomba hanombanana tsara an'io karazana safidy fanamboarana io.
Ankoatra ny maha lohahevitra fampidinana haingana indrindra azyAnkoatra ny OceanWP, dia vonona ny hanome ireo safidy fanamboarana ilaina rehetra ao amin'ny tranokala izy ireo ary hahafahantsika miditra amina kaody hatolotra azy ireo ho an'ireo mpampiasa tranokalanay. Ary farany dia azontsika atao koa ny manasongadina ireo tranokala efa niamboamboarina talohan'izay, mba hahafahantsika manana lisitra vaovao hidirana amin'ny famokarana miaraka amin'ny tsindry tokana.
Astra - marary mitsika
Ankafizin'ny maro amin'ny fanomezana be dia be entana maimaim-poana. Tena ilaina amin'ny fivarotana an-tserasera ary ao anatin'ny taona vitsivitsy dia lasa iray amin'ireo lohahevitra tsara indrindra ho an'ny WordPress izy io. Izy io dia mandeha tsara amin'ireo mpanao tranokala voalaza toy ny Elementor ary miaraka amin'ny plugins ecommerce toa ny Woocommerce.
avy amin'ny ny safidy malalaka ary miaraka amin'ny Woocommerce azontsika atao eo am-pelatanantsika ny zava-dehibe hanombohana fivarotana an-tserasera sy hanombohana ny varotra amin'ny fotoana fohy. Vonona amin'ny ecommerce, mamaly na amin'ny birao na amin'ny finday, fametrahana haingana ny tranokala, namboarina miaraka amin'ny SEO ary miaraka amin'ny fanohanan'ny fiteny samihafa mba hahavonona io tranonkala io.
Toa an'i Astra, lohahevitra misy tanjona io, noho izany dia manan-kery ho an'ny pejy fitobiana, ho fototra ho an'ny Elementor, amin'ny fivarotana an-tserasera na bilaogy tsotra fotsiny. Iray amin'ireo hira tsara indrindra ananantsika ankehitriny ary mamporisika anao izahay hijery ny kalitaony tena tsara. Izy io koa dia manana andiana fonosana premium hoentina any amin'ny toeran-kafa sasany amin'ireo safidy tsara indrindra ao aminy toy ny lohateny izay miafina amin'ny horonam-boky na koa fidirana amin'ny tambajotra sosialy izay ahafahan'ny mpampiasa vaovao misoratra anarana ao amin'ny tranonkalantsika anaty jiffy miaraka amin'ny Facebook-ny. taratasy fanamarinana na Google.
OceanWP - marary mitsika
Elementor dia saika mpanorina tranokala iray izay nitombo be tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny fahombiazany sy noho izy manome traikefa lehibe avy amin'ny maimaim-poana. Izany hoe, mba hamoronana tranokala na dia misy endrika aza dia tsy mila na handany euro isika.
Eny eny Tianay ny hampiakatra ny traikefa amin'ny ambaratonga hafa, miaraka amin'ny kinova Pro Avy amin'ny Elementor isika dia hanana ireo fitaovana rehetra ireo hamoronana karazana tranonkala rehetra. Ireo endrika misy fepetra na koa ny fahaizana mampiasa menus sisiny mora tohina mba hihodinan'ny tranonkalanao tanteraka.
Raha miresaka momba ny mpanao trano isika, midika izany fa afaka manadino momba ny fandaharana ianao, ka ny zava-drehetra sisa tavela mba hisintona ireo singa ilaintsika toy ny lahatsoratra, fizarana, lohateny, pop-up na menus ary avy eo mamolavola azy ireo noho ny interface intuitive. Elementor dia havaozina isam-bolana vitsivitsy ary ny ny zava-baovao farany tamin'ny 3.0 dia ny fampidirana ny personalization ny tranonkala miaraka amin'ny sanda ankapobeny. Izany hoe, afaka manova ny fomban'ny lahatsoratra amin'ny tranonkala iray manontolo isika na manova ny volavolan-doko mba hanaovana fanovana ara-potoana.
hanombana koa ny kalitaon'ny modely ho an'ny pejy anananao avy amin'ny tranomboky ary manana an'izy ireo maimaimpoana aza isika; Raha efa mandeha amin'ny Pro isika dia afaka miditra amin'ny karazany marobe amin'izy ireo noho ny karazan-karazan-javatra rehetra, na pejy fandraisana, e-commerce na bilaogy izany.
Un mpanorina izay mifanerasera tsara amin'ireo lohahevitra malaza toa an'i Astra na OceanWp Ary manan-kery ihany koa ny fampidirana ireo pejy fipetrahana amin'ireo lohahevitra ireo mba hamoronana pejy iray araka ny ilantsika azy. Manome antsika fahalalahana betsaka amin'ny maodely maimaimpoana izany, saingy miovaova be ny zavatra pro. Tena ilaina anio.
Elementor - marary mitsika
Este lohahevitra noforonin'i Elementor mba hahafahany manome ny entana faran'izay kely indrindra amin'ny mpizara ary afaka mampihena ny fotoana ilainay mba hamoahana ny tranokalanay. Izany hoe, ankoatry ny lohahevitra WordPress noresahina tetsy ambony, Hello Theme dia lohahevitra natokana ho an'ity mpanorina ity.
Ary ny antony namoronana azy dia ny ho takelaka banga hisorohana ny "mount" Elementor mba hamoronana tranokala tsy mila mamorona kaody HTML. Na dia tsy azo ampitahaina amin'ny lohahevitra hafa toa an'i Astra na OceanWp aza izy io dia lohahevitra tonga lafatra rehefa nanapa-kevitra izahay fa ny pejy rehetra ao amin'ny tranonkala iasantsika dia haorina miaraka amin'i Elementor. Izany hoe, ilay takelaka banga ho an'ny asa sasany dia ho tonga lafatra Hello Theme.
toy izany raha hampiasa Elementor ianao hananganana tranokala Raha tsy mila ny pejy WordPress sy ny lahatsoratra anao manokana ianao, ity lohahevitra ity dia ahafahanao mamorona an'io tranonkala io amin'ny rangotra; Na dia lojika aza dia hitaky asa bebe kokoa ianao, fa amin'ny plus azonao atao ny manao ny tranonkala amin'ny asa nataonao tao amin'ny Figma na Adobe XD.
Salama Theme - marary mitsika
iray hafa lohahevitra lehibe misy tanjona maro Ary izany, na dia tsy manana ny fahazavan'ny sasany amin'ireo voalaza hatreto aza ny enta-mavesatra, ny sandany lehibe dia noho ny fahalalahany lehibe ary satria lohahevitra mamaly ho an'ny karazana tranonkala rehetra izy.
Lazao fa miaraka amin'ny tutorial izay manampy antsika izany amin'ny dingana voalohany hananganana tranokala ary hamela izany saika vonona hanomboka amin'ny famokarana aorian'ny fananana azy amin'ny fizahana sy fitsapana. Izy io koa dia manana plugins izay manampy safidy tena takiana toy ny serivisy na fijoroana vavolombelona; Efa fantatrao fa tsara ny nahazo an'ity serivisy ity ary amporisihinay ianao ary matetika izy ireo dia mitarika fitarika amin'ireto tranonkala ireto.
Mifanaraka tsara amin'ireo mpanorina tranokala toa an'i Divi (ilay mpiara-miombon'antoka elementor, ary manoro hevitra ihany koa izahay na dia be entana aza) sy Elementor. Ankoatr'izay dia manolotra ny fahaizana manampy fizarana amin'ny drag and drop; tsy adinonay koa izany manolotra mifanentana betsaka amin'i Woocommmerce, ny plugin lamaody hananganana fivarotana an-tserasera ary misy izay ilainao amin'ny sarety, mamoaka kaonty, faktiora, mandefa mailaka ary maro hafa.
Hestia - marary mitsika
Raha mitady lohahevitra WordPress maimaim-poana isika ary inona no mifantoha amin'ireo pejin'ny orinasa ireo Amporisihinay ity lohahevitra antsoina hoe Bento ity. Manana laza malaza izy io mba ho iray amin'ireo malaza indrindra, na dia lavitra an'ireo voalaza etsy aloha aza, toa ny Astra na OceanWP.
Mandeha izahay miaraka amina lohahevitra maro lohahevitra, mba hahafahanao mampiasa azy noho ireo antony fivarotana an-tserasera na pejy fitomboana mahaliana aza izay miasa ho toy ny tionelina fivarotanao na ny tionelin'ny fantsonao ary leo anao amin'ny fitarihana taorian'ny fampielezan-kevitra tsara tao amin'ny Facebook Ads, na maninona no Google Ads.
Ho tonga a Ny lohahevitra maimaim-poana dia feno safidy amin'ny fanaingoana, Ka rehefa miala voly dia afaka mamela tranokala voalamina tsara isika; raha avy eo dia misintona ny sasany amin'ireo kaody CSS sy HTML izay efa nolalovanay izahay (miaraka amina talenta kely ho anao hahafantatra ny fomba hitantanana azy amin'ny CSS), tsara kokoa noho ny tsara kokoa. Eto ianao Menus CSS, sidebar miverina amin'ny CSSna menus boribory koa CSS (ny fiteny cascading).
Bento - marary mitsika
Miaraka amin'i Go dia mandeha amina lohahevitra iray miaro anay izahay minimalism ary nifantoka tamin'ny famoronana bilaogy. Izany hoe raha mitady mamorona tranokala ianao mba hanana bilaogy hamoahana lahatsoratra tsindraindray, dia mety izany.
Azontsika atao ny manasongadina izany amin'ny alàlan'io hafatra tongasoa io rehefa tonga tao amin'ilay tranonkala izahay sy ireo CTA na Call to Action (manan-danja toy ny bokotra izay mahazo fitarihana) ao amin'ny lohatenin'ilay tranonkala.
Tokony hataontsika asongadino ihany koa ny fanasongadinana ny typografia amin'ny tena madio ary izany dia mitondra izany fiheverana ny famakiana tena zava-dehibe izany ao anaty bilaogy. Tsy raharahiantsika ny fampiasana an'io sary navoakan'ny famoahana io na handefasana azy tsara, koa tandremo ity antsipiriany ity rehefa manapa-kevitra momba ny lohahevitra malalaka farany ho an'ny WordPress ianao.
Go - marary mitsika
Azo antoka fa ho fantatrao fa ny WordPress dia nohavaozina tamin'ny kinova lehibe kokoa izay ahafahantsika mamorona ny tranonkala amin'ny alàlan'ny sakana. Amin'io lafiny io no mahatonga an'i Blocksy ho lohahevitra malalaka, maivana sy feno fonosana ary voafaritra amin'ny fomba toy izany ho an'ireo sakana an'ny WordPress.
Manolotra a modely isan-karazany ho an'ny karazana pejy rehetra, ary azo ampiasaina hamoronana karazana tranonkala marobe, ao anatin'izany ny ecommerce, bilaogy, portfolio, ary maro hafa. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny mpanorina tranokala Elementor malaza ary miasa tsara amin'ny Woocommerce.
Ho fanehoan-kevitra amin'ny antsipiriany izay manolotra rafi-pitenenana "kamo", ary midika izany fa miakatra ny sary rehefa manakodia ny tranonkala isika; Midika izany fa raha tsy "midina" mankany amin'ny faran'ny tranonkala ny mpampiasa dia tsy hampiditra ny singa rehetra izy ireo, izay midika fitehirizana tsara amin'ny fotoana anaovana ny tranokala na ny pejy fipetrahana. Vonona ho an'i Retina ary hamaly toa ny finday ny lohahevitra iray izay atolotray.
Blocksy - marary mitsika
Ka mifantoka amin'ny a Lisitry ny lohahevitra tsy dia be loatra, fa manana kalitao avo lenta ary maimaim-poana amin'ny WordPress. Ankehitriny dia mijanona ho anao ny manandrana ny iray ary ny iray hafa hahitana ny iray mety indrindra aminao amin'ny filanao manokana na an'ny an'ny mpanjifa mila anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Wordpress » Lohahevitra WordPress maimaim-poana tsara indrindra
Banky sary 12 Creative Commons